News - Coronavirus-ka cusub ee Isbeddelka loogu sameeyay Isbaanishka si looga fogaado in lagu celiyo taariikhda. Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa mar kale furay Siyaasadda go’doominta
Fayraska cusub ee loo yaqaan 'Coronavirus' wuxuu isku beddelay Isbaanish si looga fogaado in lagu celiyo taariikhda. Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa markale Furey Siyaasada Xanibaada
Coronavirus cusub ayaa isbedelay Isbaanishka
Inta lagu jiro xilliga Halloween, sida ku xusan TIMES, Britain ayaa u codeyn doonta Baarlamaanka asbuuca soo socda. Maaddaama uu faafay cudurku, Ingiriiska wuxuu dooran doonaa inuu galo go'doominta qaranka mar kale ka hor waqtigii loo qabtay, taasoo la filayo inay socon doonto illaa horraanta Diseembar. Tani waxay noqon doontaa waddan kale oo muhiim ah oo reer galbeedka ah kadib xayiraadihii is xigxigay ee ay kala galeen Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga. Sababta ugu weyn ee walaaca ay u qabaan wadamada Yurub ayaa ah in 46% kiisaska cusub ee la xaqiijiyay ee adduunka ay ka yimaadeen Yurub usbuucii hore, halka seddex meelood meel dhimashadu ay sidoo kale ka timid Yurub. Sida lagu sheegay warbixin cilmiyaysan, kiisaska cusub ee coronavirus-ka cusub ee Yurub dhab ahaantii waxay ka yimaaddaan coronavirus la beddelay. Virus-kan ayaa laga yaabaa inuu si toos ah ugu soo booday Spain, taas oo iyaduna ah mid ka mid ah sababaha muhiimka ah ee ay coronavirus-kan cusub u adag tahay in laga xakameeyo Yurub isla markaana uu leeyahay heer aad u sareeya oo dhimasho ah!
Baqdinta taariikhda soo noqnoqota
Cudurka faafa ee cusub wuxuu dad badan xusuusinayaa hargabkii Isbaanishka ee ka dillaacay taariikhda aadanaha ee casriga ah. Waqtigaas, ifilada Isbaanishka waxay ka soo bilaabatay beeraha Mareykanka. Maaddaama Mareykanku askar u diray Yurub si ay uga qayb galaan Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, waxay kaloo la timid fayraska ifilada Spain. Markii aan gaarnay Yurub, waddammadii ka qayb galay Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, sida Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, waxay qaateen qaab qarsoodi ah si looga hortago hargabku inuu baabi’iyo anshaxa hore. Si kastaba ha noqotee, Isbaanish, oo ah dal dhexdhexaad ah Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, ayaa sii waday baahinta tirada dadka u dhintay hargabka. Sideed milyan oo qof ayaa ku dhacay ifilada, sidaas darteed waxaa ugu dambeyntii loo aqoonsaday ifilada Isbaanishka. Muuqaalka ugu weyn ee hargabka Isbaanishka ayaa ah in mowjadda labaad ee isbeddellada kadib, ifilada Isbaanishka ay xitaa sii daran tahay. Tirada dhalinyarada iyo dadka da ’dhexaadka ah ee dhintay ayaa u badnaa. Marka la barbardhigo 10 milyan oo qof oo ku dhimatay Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, tirada dhimashada ee uu sababay ifilada Isbaanishka waxay ahayd 50 milyan. ~ 100 milyan oo qof. Fayraska cusub ee taajku wuxuu ka socdaa Yurub waqtigan, Spain sidoo kale waa meelaha ugu daran ee uu ku dhacay, sidoo kale viruska isbadalkiisa ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay Spain, iyadoo casharo taariikhi ah leh, sidaa darteed wadamada yurub waxay ka baqayaan in taariikhdu dib isu soo celiso, markaa waxay u muuqdaan kuwo taxaddar badan leh marka wax ka qabashada mawjadda labaad ee cudurrada faafa ee taaj cusub, Ma jiro waddan iyo cilmi-baarayaal cilmiyaysan oo ku talinaya in la isticmaalo xasaanadda xoolaha si loola dagaallamo coronavirus-ka cusub.
Isbarbardhiga xogta saddexda mowjadood ee hargabka Isbaanishka
Ka dib markii aad la kulantay wacyiga aadanaha ee coronavirus-ka cusub, inkasta oo tikniyoolajiyadda bani'aadamka ee hadda jirta ay aad uga xoog badan tahay tan ifilada Isbaanishka ee caanka ahayd boqol sano ka hor, iyada oo loo marayo ku dhowaad sannad fahamka coronavirus cusub, waxay u dhaxeysaa qarsoodiga iyo astaamaha nooca coronavirus-ka cusub Marka loo eego saamiga, faafitaanka cusub ee coronavirus-ka ayaa ka xoog badan, xitaa cilmi baare u dhashay Ruushka ayaa si gaar ah isugu gudbiyay cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus', isagoo xaqiijinaya in cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' uu qaadi karo laba jeer ama saddex jeer, taas oo sidoo kale muujineysa in tallaalku waa mid waxtar badan, ifilada Isbaanishkuna waa tan ugu horreysa. Marxaladda ayaa dhacday gu'gii 1918, asal ahaanna waxay ahayd hargab caadi ah oo saameyn yar leh, ka dibna si kooban ayaa loo waayey. Saameynta ugu badan waa mowjadda labaad ee ifilada Isbaanishka oo dhacday dayrta 1918. Waxay ahayd mowjadda leh heerka dhimashada ugu sareysa. Waqtigaas, fayraska hargabku wuxuu kufeyray nidaamka difaaca bini'aadamka wuxuuna sababay ifilada Isbaanishka inay mar labaad kacdo. Dhameystirka waxqabadka wuxuu sababi doonaa soo bixitaanka fayras aad u daran. Maaddaama habka difaaca bini'aadamka uu la qabsanayo mowjadda labaad ee hargabka Isbaanishka, hal sano ka dib, mowjadda saddexaad ee hargabka ayaa dhacday jiilaalka 1919, iyo mowjadda saddexaad ee ifilada Isbaanishka waxay leedahay heer dhimasho u dhaxeysa inta u dhexeysa mowjadda koowaad iyo tan labaad!
Sidaa darteed, in kasta oo cudurka faafa ee taajka ah si wax ku ool ah looga xakameeyay Shiinaha, waa inaan si fudud loo qaadan. Si kastaba ha noqotee, taariikh ahaan muraayad ahaan, ifilada Isbaanishka ayaa ah buugga ugu fiican taariikhda cudurka faafa!